‘ह्याप्पी वर्थ डे’ : कति वर्ष लागिन् ‘ऐश्वर्य’ की दीपिका ? « Ramailo छ
‘ह्याप्पी वर्थ डे’ : कति वर्ष लागिन् ‘ऐश्वर्य’ की दीपिका ?
समय : 3:29 pm
फिल्म ‘ऐश्वर्य’ डेव्यु नायिका दीपिका प्रसाईंको जन्मदिन खास कात्तिक २३ गते हो । तर अंग्रेजी मितिलाई आधार मान्दै समाजिक सञ्जालमा दीपिकालाई कात्तिक २२ मै जन्मदिनको शुभेच्छा आइरहेको छ । ‘भोलि त विस नै नआउँला जस्तो छ’, दीपिकाले हाँस्दै भनिन् ।
पहिलो फिल्म बाटै ‘नोटिस’ भएकी दीपिका कति वर्ष पुगिन् होला त ? ‘नढाँटेर भन्नु पर्दा भोलिदेखि २२ लाग्छु’, दीपिकाले ढुक्कसँग भनिन् । पहिलो फिल्म सफल भएपनि दीपिका हतारमा फिल्म खेलि हाल्ने मनस्थितिमा भने छैनन् । आफुलाई थप ‘ग्रुम गरेरे अगाडी बढ्ने’ सोच बनाएकी दीपिका पढाईलाई पनि निरञ्तरता दिने योजनामा छिन् । उनी मास्टर्स पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन पहिलो वर्षकी विद्यार्थी हुन् । दीपिका र अभिनेता रमेश उप्रेतीसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
कैलाली अत्तरिया स्थायी घर भएकी दीपिका ‘ऐश्वर्य’ खेल्नु पुर्व मोडलिङ गर्दथिन् । मोडलिङ हुँदै बिग स्क्रिनमा देखिएकी दीपिकाले फिल्म क्षेत्रमा कस्तो जादु देखाउलिन् ? त्यो भने उनले खेल्ने बाँकी फिल्मले निर्धारण गर्नेछ । ‘ऐश्वर्य’ बाट सम्भावना बोकेकी दीपिकालाई जन्मदिनको शुभकामना !